Hawsha Shaqo ee Wax soosaarka Macluumaadka | Martech Zone
Hawsha Shaqo ee Wax soosaarka Macluumaadka ah
Khamiista, Febraayo 21, 2013 Khamiista, Febraayo 21, 2013 Jenn Lisak Golding
Maaraynta soosaarka infographic macaamiishayda at DK New Media iyo kuwa Martech Zone, Waxaan ka bartay shay ama laba shay oo ku saabsan soo saarista sawirada. Waxay qaadataa waqti in lagu hagaajiyo socodkaaga shaqada iyo naqshadeynta waqtiga. Wax soosaarka Infographic wuxuu qaadan karaa toddobaadyo ama bilooyin in la soo saaro haddii aanad haysan qorshe sax ah oo meesha yaal, ama shaqo socodsiin habboon. Halkan waxaa ah talooyin dhowr ah oo (rajo leh) yareya waqtiga oo kugu hagaajiya wadada saxda ah.
1. Maskax gal fikrad "wadaag u qalma".
Haddii aad u soo saareyso infographic macmiil ama ganacsi u gaar ah, waxaad u baahan tahay inaad la timaaddo mowduuc guud oo ka shaqeyn doona ganacsiga gacanta ku haya. Ahaanshaha "wadaag istaahila" waxay ku lug leedahay dhowr shay:
Ma kulushahay? Sizzle
Miyuu ku hareeraysan yahay mowduuc “raadin mudan”?
Markaad fikrad leedahay, samee fursado cinwaan oo kala duwan. Hubso inay ka codsanayaan suuqyadaada bartilmaameedka ah iyo inay ku jiraan ereyada muhiimka ah cinwaanka. 3 - 5 eray isku darka ereyga ayaa ugu fiican. Tusaale: Xogtayada ugu dambeysa waxaa ka mid ah isku-darka ereyga muhiimka ah “suuqgeynta moobiilka, ”Laakiin waxaa cinwaan looga dhigay si ku habboon si loo soo jiito guulaha la taabto.
Fikradda fikradda: Fadlan, fadlan, fadlan ha ka badin ka fikirka tan. Tani waa inaanay qaadin wax ka badan toddobaad si loo ogaado oo loola macaamilo macmiilkaaga (ama gudaha).
2. Cilmi baaris, cilmi baaris, cilmi baaris.
Waxaa ka muhiimsan in la helo xog dheeri ah oo laga soo jiito inta aan ku filneyn. La imow liistada barta rasaasta ee noocyada tirooyinka aad raadineyso. Waxaa jira ilo dhaqaale oo wax ku ool ah oo bixi doona oo kuu heli doona xogta adiga. Laakiin sidoo kale waxaad ku haysataa internetka farahaaga. Waqti sii waqti si aad ugu baxdo oo aad u baarto mawduucyada aad go'aansatay.
Tilmaamaha cilmi baarista: Waxaan kugula talinayaa inaad nuqul ka sameyso oo aad dhajiso dhamaan xiriiriyeyaasha aad ka heshay waxtarka dukumiintiga ah, ka dibna aad dib ugu noqoto oo aad dib u eegis ku sameyso xiriir kasta oo halkaa ka socda. Nuqul oo ku dheji macluumaadka ka soo baxa xiriiriyeyaasha aad u aragto inay ku jiraan doc-ka, ka dibna xiriiriyaha si toos ah hoosta ugu xidho xogta laga helayo ishaas si aad u ogaato halka laga soo saaray (tan dambe ayey muhiim noqon doontaa).
3. Waqti sheeko!
Waa kuwan tallaabooyinkeygu si aan u abuuro sheeko isku dhafan:
a. Markaad dhamayso wajiga cilmi baarista, dib ugu laabo oo u akhri dukumintiga oo dhan. Maxaa loo baahan yahay? Waa maxay "meh"? Kaliya ku dar waxa aad u maleyneyso inay run ahaantii qasab ku yihiin, illaa tirooyinka taageeraya ay lagama maarmaan u yihiin muujinta muhiimadda tira cayiman. Hubso inaad wax ka beddesho waxyaabaha ku jira si ay ugu jirto “codkaaga,” laakiin hubi inay weli ka tarjumeyso waxa tiradu sheegayso ee ah inaan wareer jirin.
Tusmada tusmada: Hubi dhererka docga. Hadday ka badan tahay 5 bog (qiyaas ahaan - iyadoo ku xiran hadba sida jaantuska ama qoraalka uu u culus yahay), dib u laabo oo wax badan ka goo.
b. Marka docka la jaro, fiiri nidaamka amarka. Eeg haddii ay sheegeyso sheeko ama ay isku xiran tahay. Xog ururinta si wadajir ah ugu samee qaybo macno samaynaya. Geli xogta ugu adag ee gunta.
c. Fikrad ahaan, waxaa jira fariin guud ama wacitaan-ku-dhaqaaq. Waa maxay macluumaadka ugu muhiimsan ee aad doonayso inay dhagaystayaashaadu ka qaataan? Qeybta hoose ee qoraalka, ku dar sadar gaaban ama jumlad ka tarjumeysa tan. Adigu waxaad leedahay hoggaamiye feker ah meheraddaada, ka feker inaad ku darto madax-madaxeedkooda iyo cinwaankooda ku xigta si aad u gaar yeelatid.
4. Qaybta xiisaha leh: naqshadeynta.
Naqshadeeye waa inuu haystaa dukumiinti dukumeenti dhameystiran gacanta ku haya, cinwaankiisuna yahay, socodka waxyaabaha ku jira, iyo ilaha. Tani waxay badbaadin doontaa waqtiga wajiga naqshadeynta. Waxyaabaha kale ee loo gudbiyo ayaa ah tusaalooyinka sawir-baadhiseed ee aad aragtay oo aad jeclaatay si ay fikrad uga helaan midabada iyo qaababka.
Xusuusnow qoraalkaas aan ku idhi oo ku saabsan dhigitaanka isku xidhkaaga khayraadka si toos ah hoosta waxyaabaha aad ka soo jiiday? Ha naqshadeeyaha ha dhigo qoraallo qoraal ah oo ku xiga dhammaadka xogta (1, 2, 3) oo tixraaci doona iskuxirayaasha nuxurka ee hoose ee infographic. Bal eeg annaga iibinta faahfaahinta iibinta waxaan ku sameynay TinderBox si aan u aragno tusaale.
Miyaadan ku haysan naqshadeeye gudaha ama miisaaniyad? Waa kuwan talooyin labo ah oo loogu talagalay wax soosaarka yar yar ee ganacsiga.
Tilmaamaha naqshada: Bixi jawaab celin waqtigeeda leh, oo cad oo ku saabsan naqshadeynta. Naqshadeeye wanaagsan ayaa ku siin doona qeyb yar oo ka mid ah naqshadeynta ka hor intaadan buuxin bogga oo dhan si aad u aragto haddii ay ku socdaan jihada saxda ah. Ha ka baqin inaad dhahdo “Waan ka helaa waxa uu naqshadeeye halkan ku sameeyay sawirkan” ama “beddel midabada.”
Guud ahaan jadwalka: Rikoodhkaygii ugu fiicnaa wuxuu ahaa toddobaadyo 3, laakiin guud ahaan, waxaan u arkaa inay qaadanayso qiyaastii 4 - 6 toddobaad si loo soo saaro xog-ururin adag. Gaar ahaan haddii aad la shaqeyneyso macmiil.
Ku baashaala. Diyaargarow, laakiin baashaal inta lagu jiro safarka.
Sida Loo Helo Saami Dheeraad Ah Facebook
Calaamadeeyaha Sameeyaha wuxuu leeyahay Bulsho foosto hoosteed - Biyo badan oo Laan ah, Fadlan!